संगीतका प्रेरणा तबला गुरु पं. होेमनाथ उपाध्याय
असोज १, २०७४ | डा. ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी
प्रसिद्ध तबलावादक तथा उत्कृष्ट प्रस्तोता पं. होमनाथ उपाध्यायले भारतका पण्डित रामजी मिश्र, अहमदजान थिरकुवा तथा नेपालका शम्भुप्रसाद मिश्र जस्ता प्रसिद्ध गुरुहरूबाट संगीत शिक्षा लिएका थिए । तर उनी तबलावादक मात्र थिएनन्, नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका ज्ञाता, कुशल शिक्षक तथा विद्वत् व्यक्तित्व पनि थिए । भारतको प्रयाग संगीत समितिबाट तबला विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उपाध्यायले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, पोर्टलैण्ड, कोलोराडो र वाशिङ्टन राज्यका विश्वविद्यालयहरूमा पटक–पटक गरी झ्ण्डै दुईदशक नेपाली संगीत र तबला शिक्षण गरेका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समेत संगीत विशेषज्ञको रूपमा कार्य गरेका थिए । पं. उपाध्याय आफ्नो व्यावसायिक यात्राको आरम्भका लगभग पाँच वर्ष बलिउडका प्रसिद्ध संगीतकार आर.डी. बर्मनको समूहमा समेत संलग्न थिए ।
धेरै वर्षसम्म नेपालमा तबलावादनका पर्यायका रूपमा चिनिएका र विश्वकै उत्कृष्ट तबलावादकको श्रेणीमा गनिएका पं. उपाध्यायले राज्यको तर्फबाट कुनै उपाधि वा सम्मान नपाए तापनि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट धेरै पदक, सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उनको भौतिक शरीर आज हाम्रोसामु छैन तथापि उनका कृति, रचना तथा स्वदेश, विदेशमा रहेका उनका हजारौं शिष्यहरूले उनको योगदानलाई अमर पार्ने काम गरिरहेका छन् । यस्ता गुणी व्यक्तित्वसँगका केही अविस्मरणीय सम्झ्नाहरूलाई श्रद्धाञ्जलीस्वरुप यहाँ उल्लेख गरेको छु :
हाम्रो बाल्यकालमा सञ्चार र मनोरञ्जनको मुख्य साधन रेडियो थियो । एकाबिहानै धार्मिक कार्यक्रमसँगै खुल्ने अधिकांश रेडियो सेटहरू राति राष्ट्रगान बजेपछि मात्र बन्द हुन्थे । घरमा रेडियो नबजे पनि टोल, छिमेक, पसल र चोकमा घन्किने रेडियोले सबैलाई मनोरञ्जन गराइरहेका हुन्थे । त्यसैले रेडियो प्रस्तोताका स्वर वा नाम कसैका लागि पनि अपरिचित रहँदैनथे ।
समाचारमा कृष्णा ताम्राकार, प्रवीण गिरी, धार्मिक कार्यक्रममा पुरुषोत्तम सापकोटा, फर्माइसी गीत कार्यक्रममा पाण्डव सुनुवार, साहित्यिक कार्यक्रममा यज्ञनिधि दाहाल तथा बाल कार्यक्रममा वासुदेव मुनाललगायतका प्रस्तोताहरू त्यसबेलाका सेलिब्रिटी नै थिए । यस्तै कार्यक्रमहरूको माझ् शास्त्रीय संगीतको कार्यक्रममा ‘तबलामा साथ दिने’ संगीतकारको रूपमा प्रायः उद्घोषकले लिने एउटा नाम थियो, पं. होमनाथ उपाध्याय, जसलाई चिन्ने र जान्ने चाहना मेरो बालमनमा जरो गाडेर बसेको थियो ।
२०३३ सालमा मेरा काका, पत्रकार एवं अर्थशास्त्री महेशचन्द्र रेग्मी एशियाको नोवल पुरस्कारको रूपमा चिनिने रामोन म्यागसेसे अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँलाई अभिनन्दन गर्न एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा मैले सितारवादन गर्नुपर्ने भयो । र, त्यहाँ मलाई तबलावादक शंकरबहादुर थापाले संगत गरिदिनुपर्ने थियो । तर, कार्यक्रम शुरू हुने बेलासम्म पनि शंकर थापाजीलाई नदेख्दा मेरो बालमन अत्तालिन थाल्यो ।
त्यतिञ्जेलसम्म मैले थापाजीसँग नै अभ्यास गर्दै आएको थिएँ । मलाई डराएको देखेर होला, एकजना पातलो तर आकर्षक र उज्यालो अनुहार भएका व्यक्तिले सान्त्वना दिंदै, “बाबु, म संगत गरिदिन्छु, डराउनुपर्दैन” भने । उनलाई मैले चिनेको थिइनँ । तर उनलाई अरूले गरेको आदर देखेर यी पक्कै पनि ठूलै कलाकार हुन् भन्ने अनुमान चाहिं गरिसकेको थिएँ ।
अहिले पनि त्यो दृश्य म झ्ल्झ्ली सम्झ्न्छिु । कलाकारको परिचयको क्रममा उद्घोषकले “तबलामा पं. होमनाथ उपाध्याय” भनेपछि भने म स्तब्ध नै भएको थिएँ । आफ्नो जीवनकै पहिलो प्रस्तुतिमा आफूले सधैं नाम सुनेको र चिन्न चाहेको व्यक्तिको संगत पाउनु मेरो सौभाग्य थियो । पछि थाहा पाएँ, उहाँसँग हाम्रो परिवारका मान्यजनहरूको बनारसदेखिको पुरानै परिचय तथा हिमचिम रहेछ । त्यस दिनपछि हाम्रो भेटघाट बढ्दै गयो र अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित हुनगयो । म क्रमशः उहाँलाई आफ्नो संगीतको संरक्षकको रूपमा हेर्न थालें । वास्तवमा मलाई यस क्षेत्रमा अगाडि लाग्न, सघाउन र मेरो वादनलाई खार्नका लागि उहाँले ठूलै मिहिनेत गर्नुभएको थियो ।
मेरो बुवा पं. सतीशचन्द्र रेग्मी, रेग्मी सांगीतिक घरानाका तेस्रो पुस्ताका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । तर नेपाली संगीतकारहरूको बीचको आपसी खिचातानी र इष्र्यालु वातावरणबाट दिक्क भएर उहाँ त्यो माहोलबाट टाढै बस्न रुचाउनुहुन्थ्यो । त्यसैले सांगीतिक समुदायमा मलाई परिचित गराउने र रेग्मी घरानाको वादन विशेषतालाई जनमानसमा उजागर गराइदिने काममा होमनाथ दाइको उल्लेखनीय योगदान रहेको थियो ।
पछि मैले भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी दिल्लीबाट संगीतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाएँ । चार वर्ष भारतमा पढेर नेपाल फर्केपछि होमनाथ दाइसितको सम्बन्ध अझ् प्रगाढ भयो । उहाँकै अग्रसरतामा हामीले ‘प्रस्तार’ नामक लोक शास्त्रीय सांगीतिक समूह स्थापना ग¥यौं, जहाँ ताल वादनमा उहाँ स्वयं, सितारमा म, बेलामा नोर्बु लामा र बाँसुरीमा मनोज सिंह थियौं । प्रस्तार छोटै समयमा नेपाली सांगीतिक परिवेशमा स्थापित भयो । समूहका कारण नियमित अभ्यास र भेटघाट बढ्यो र उहाँसँगको सामीप्य अझ् गाढा भयो, जसले मलाई संगीतका विविध पक्षका सम्बन्धमा शिक्षित, दीक्षित र स्थिर हुन मद्दत ग¥यो ।
त्यसै बेला अमेरिकाको कोलोराडोस्थित लायन्स क्लब अफ बोल्डरबाट हामीलाई कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि निम्तो आयो । वरिष्ठ नृत्यकार सुरेश मिश्र तथा पं. होमनाथ उपाध्यायका साथमा मैले लगभग ६ महीना (२०४८ साल पुसदेखि २०४९ जेठसम्म) अमेरिकाका विभिन्न शहर तथा विश्वविद्यालयमा झ्ण्डै ५२ वटा सांगीतिक प्रस्तुति तथा शैक्षिक प्रवचन गर्ने मौका पाएँ । त्यस्ता खारिएका व्यक्तित्वहरूसँगको लामो संगतले मलाई संगीतलगायत जीवनका अन्य धेरै पक्षहरूको विषयमा समेत बुझने र सिक्ने अवसर दिलायो ।
अमेरिका बसाइको अन्त्यतिर न्यूजर्सीस्थित एउटा संगीत विद्यालयबाट हामीलाई कामको प्रस्ताव आयो । धेरै विचार–विमर्श पछि हामीले प्रस्ताव अस्वीकार गरी नेपाल नै फर्कने निर्णय ग¥यौं । त्यस क्रममा पं. उपाध्यायले भन्नुभएको वचन अहिले पनि मेरो मनमा ताजै छ, “बाबु, जुन इज्जत र प्रतिष्ठा आफ्नो मातृभूमिमा पाइन्छ त्यो संसारमा कहीं गएर पनि पाउन सकिन्नँ । आज हामी यहाँ काम गरेर बस्यौं भने हामीलाई इज्जत र मान गर्ने साथीहरूले समेत हाम्रो साथ छोड्नेछन्, तसर्थ काम गरेर बस्नेभन्दा कामका लागि समय समयमा आउने लक्ष्य राख्नुपर्दछ ।” उहाँले मलाई पटकपटक यस्ता सुझव र सल्लाह दिएर सही मार्गनिर्देश गरिदिनुभएकै कारण आज मैले संगीत क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हुँ । मेरो सांगीतिक यात्राको लगभग २६ वर्षको अवधिमा मैले यस्ता धेरै अवसर प्राप्त गरें । तर मलाई विदेशमा बस्ने रहरले कहिल्यै आकर्षित गर्न सकेन ।
मलाई लाग्छ, यसमा दृढ बनाउनमा होमनाथ दाइकै सल्लाहले मार्गदर्शन गरेको हो ।
२०५३÷५४ सालतिर पं. उपाध्याय एकाएक मबाट विस्तारै टाढिन थाल्नुभयो । उहाँको मप्रतिको व्यवहार पनि अर्कै हुनथाल्यो ।
मबाट अन्जानमा केही गल्ती भएछ कि भनी आफ्ना कर्म र व्यवहारको समीक्षा गर्ने प्रयास गरें । तर कसैगरी पनि त्यसको भेउ पाउन सकिनँ । जुन व्यक्तिलाई मैले आफ्नो आदर्श र मार्गदर्शक मान्दथें, जसको छत्रछायाँमा मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने म ठान्दथें त्यही व्यक्तिसँग सम्बन्ध चिसिंदा म अत्यन्तै मर्माहत भएँ । आफूलाई थप कमजोर र निराश हुनबाट जोगाउनका लागि बाँसुरीवादक मनोज सिंह र तबलावादक अतुल गौतमको सहयोगमा सुकर्म सांगीतिक समूहको स्थापना गर्नतिर लागें । यसको केही समयपछि पं. उपाध्याय पनि अमेरिकाको सान्त बारबरास्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा त्यसतर्फ लाग्नुभयो । लगभग एक दशक अमेरिका नै बसेर उहाँ २०७० सालमा मात्र नेपाल फर्कनुभयो ।
पं. उपाध्याय अमेरिकाबाट फर्केपछि भने हाम्रो सम्बन्ध पुरानै रूपमा अगाडि बढ्यो । भेटघाट, अभ्यास, कार्यक्रमहरूमा सहभागिता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूले निरन्तरता पाउन थाले । २०७१ को मंसीरमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वाद्य गोष्ठी तथा संगीत सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट हामी दुवैको सहभागिता रह्यो । त्यसै वर्ष चैतमा पाकिस्तानको इस्लामावाद तथा लाहोर शहरमा आयोजित सुकर्मको कार्यक्रममा अतिथि कलाकारको रूपमा उहाँ सहभागी हुनु हाम्रा लागि एउटा सौभाग्यको विषय भयो । उहाँ संलग्न रहनुभएका ती प्रस्तुतिले ज्यादै प्रशंसा समेत आर्जन गरेका थिए । उहाँसँग यूरोपियन राष्ट्रहरूको सांगीतिक भ्रमण गर्ने वर्षाैंदेखिको मेरो अधुरो चाहना पूरा गर्ने अवसर पनि मैले त्यही वर्ष प्राप्त गरें । २०७२ साउन÷भदौमा यूरोपियन राष्ट्रहरूमा कार्यक्रमका लागि सुकर्मलाई प्राप्त निमन्त्रणामा हामीले उहाँलाई सहभागी बनाउन सक्यौं, जुन कार्यक्रमलाई यूरोपियन श्रोताहरूले अत्यन्तै उत्कृष्ट माने । उल्लिखित तीनवटा यात्रामा उहाँको साथ पाएको कुरा सम्झ्ँदा अहिले पनि मलाई सुखद् अनुभूति हुन्छ ।
पं. उपाध्यायको जीवनशैली हामी सबैका लागि अनुकरणीय थियो । नित्य बिहान उठेर योगसाधनाका साथै निरन्तर संगीतको अभ्यास गरी संगीत प्रशिक्षणको कार्यमा संलग्न रहनुहुन्थ्यो । उहाँका केही इच्छा र योजनाहरू थिए– संगीत क्षेत्रमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने भावना थियो र त्यसका लागि निरन्तर प्रयत्नरत रहनुभयो । उहाँ एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तर योगदानको आधारमा कुनै महाविद्यालयभन्दा कम हुनुहुन्नथ्यो । नेपालमा तबला शिक्षा वा तबलाको विकासमा उहाँको योगदानलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने आज नेपालमा भएका झ्ण्डै ८० प्रतिशत तबलाका शिक्षक वा वादकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग सिकेको पाइन्छ । तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक संस्थान वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर उत्पादन गर्न नसकेको सांगीतिक जनशक्ति उहाँले आफ्नो एक्लो प्रयासबाट सम्भव गराउनुभएको थियो ।
होमनाथ दाइभन्दा अगाडि कमै मात्र नेपाली कलाकारहरू आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासमा विदेश भ्रमण गर्दथे । सत्ता र व्यवस्थासँग नजिक भएका केही कलाकारहरूले मात्र तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक संस्थान वा नेपाल सरकारको सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलमा सामेल हुने अवसर प्राप्त गर्दथे । तर निजीस्तरमा नेपाली संगीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने सन्दर्भमा उहाँको महŒवपूर्ण योगदान रहेको थियो र हामी पछिल्लो पुस्ताका लागि उहाँ उत्प्रेरक नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ शिक्षित र अंग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा कार्यक्रम आयोजकहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउने कलामा उहाँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो । सम्भवतः व्यक्तिगत प्रयासमा नेपालका अरू सबै शास्त्रीय संगीत कलाकारहरूभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने कलाकारको सूचीमा उहाँ पर्नुहुन्थ्यो ।
विधिको विडम्बना, निरन्तर कर्म गरिरहेको अवस्थामा अचानक उहाँ अस्वस्थ हुनुभयो । परीक्षणको क्रममा पेटको आन्द्रामा क्यान्सर जस्तो घातक रोगले उहाँलाई आक्रमण गरी शरीरका अन्य भागमा समेत फैलिइसकेको ज्ञात हुन आयो । क्यान्सर जस्तो अत्यन्तै महँगो उपचार एउटा नेपाली शास्त्रीय संगीतकर्मीको निम्ति ठूलै चुनौतीको विषय थियो । तथापि, उहाँको परिवार र हामी संगीतकर्मीहरूले उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास ग¥यौं । प्रभावकारी उपचारका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, नेपाल संगीत नाट्य प्रतिष्ठानलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग नेपाल शास्त्रीय संगीत समाजका तर्फबाट औपचारिक रूपमा अनुरोध समेत गरियो । तर विडम्बना, हाम्रो अनुरोधले मूर्तरूप लिनुपूर्व नै उहाँको देहावसान भयो ।
प्रस्तुतिका शैली, संगत गर्ने विशेष किसिमको दक्षता, सहयोगी एवं मिलनसार स्वभावका कारण जहाँ शास्त्रीय संगीतका कार्यक्रम हुन्थे त्यहाँ पं. उपाध्यायको उपस्थिति निर्विकल्प मानिन्थ्यो । गायन, वादन वा नृत्य कुनै पनि विधामा होस्, सबै कलाकारको पहिलो रोजाइमा होमनाथ दाइ नै पर्नुहुन्थ्यो । संगतमा मात्र होइन उहाँको एकल तबला वादन प्रस्तुति पनि त्यत्तिकै आकर्षक र बेजोडको हुन्थ्यो भने उहाँमा संगीतको सैद्धान्तिक पक्षमा पनि राम्रो पकड थियो ।
यस्ता व्यक्तिको साथ र सामीप्यतामा आफ्नो बाल्यकाल तथा युवावस्था बिताउन पाउनु मेरा लागि वास्तवमा एउटा गौरवकै विषय थियो । त्यसबाहेक मेरा लागि थप सौभाग्यको विषय हो, मेरो जीवनका सबैजसो प्रथम सांगीतिक कार्यहरू मैले पं. होमनाथ उपाध्यायका सामीप्यतामा नै गर्न पाएँ । मलाई जीवनभर उहाँको जुन सान्निध्य र अभिभावकत्व प्राप्त भयो, त्यसनिम्ति म उहाँप्रति सदासदा अनुगृहीत रहनेछु । पं. होमनाथ दाइ मेरा लागि अविस्मरणीय रहनुहुनेछ । अस्तु ।
पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, त्रि.वि.वि.
संस्थापक, सुकर्म सांगीतिक समूह